ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး Screen ဖြန့်လို့ရတဲ့ဖုန်းဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲ?? — Anycall Mobile
By liam November 18, 2020 1 Min Read
Oppo အနေနဲ့ မနေ့ကတုန်းက “Inno Day” ဆိုတဲ့ Event တစ်ခုကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာဆိုရင် Inno Day ဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်း ဆန်းသစ်လှတဲ့ Products အသစ်တွေကို OPPO ဘက်ကနေချပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီ Products တွေမှာလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ Product တစ်ခုကတော့ Oppo X 2021 ဆိုတဲ့ Concept ဖုန်းပါပဲ။
ဆိုတော့ Oppo X 2021 ဟာဘယ်အချက်တွေကြောင့် လူတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားနေကြလဲ?
ပထမဆုံးကတော့ ဖြန့်လို့ရတဲ့ Screen ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။ ဒီ Screen ဟာဆိုရင် ပုံမှန်အခြေနေမှာ ရိုးရိုးဖုန်းတစ်လုံးလို 6.7-inch ရှိပြီး ဖုန်းရဲ့ညာဘက်ဘေးကနေရာကိုပွတ်လိုက်ရင်တော့ ဖုန်းရဲ့ Screen ဟာ 7.4-inch အထိ ပြန့်သွားပါတယ်။ ဒီလိုဖြန့်လို့ရတဲ့ OLED Display ကိုတော့ နာမည်ကြီး Display ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ BOE ကနေထုတ်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖုန်းကိုအကြမ်းခံစေဖို့အတွက် OPPO ကနေ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Power Train နဲ့ Structural Plate တို့ကိုပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ ‌ နောက်ထပ် Foldable Phone တွေတွေခေါက်တဲ့အရာတွေ ၊ တွန့်လိမ်တာတွေ မဖြစ်စေဘူးလို့ OPPO ရဲ့အဆိုအရသိရပါတယ်။ လက်ရှိမှာ Oppo X 2021 ရဲ့ Specs တွေကို OPPO ကနေ ထုတ်ပြခဲ့သွားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အောက်မှာတော့ Oppo X 2021 ပုံတွေကိုပြပေးထားပါတယ်။
ဒီလို ဖြန့်လို့ရတဲ့ Display နဲ့ဖုန်းကို OPPO ကနေပထမဆုံးထုတ်ပြခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနှစ်အစောပိုင်းကတည်းက TCL ကနေ Oppo X 2021 နဲ့ဆင်တဲ့ Prototype ဖုန်းတစ်လုံးကိုစထုတ်ပြခဲ့တာပါ။ နောက်ထပ် LG ကနေလည်း ဒီလိုဖုန်းမျိုးကို Teased ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဆိုတော့ဒီလိုဖုန်းမျိုးကို ဈေးကွက်ထဲမှာ ဘယ်အချိန်မှာ တွေ့လာရနိုင်လဲ? လက်ရှိ Oppo X 2021 ဟာ Concept Phone သာရှိသေးတဲ့အတွက် ဈေးကွက်ထဲမှာ မြင်လာရဖို့ကကြာဦးမှာပါ။
စာဖတ်သူအနေနဲ့ ဒီ Rollable ဖုန်းအပေါ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ?? နောက်ပြီး Foldable ဖုန်းတွေနဲ့ယှဉ်ရင် ဘယ်ဖုန်းကိုပိုသဘောကျကြလဲ??